စိတ်မှာထင်ရှား သတိထား နာမ်တရားလို့ရှုရမည် - ရတနာဝါသ ဘုရားကျောင်း 華緬 三寶寺
စိတ်မှာထင်ရှား သတိထား နာမ်တရားလို့ရှုရမည်
Posted by ukkmaung on January 25, 2015 at 9:27pm
`` စိတ်မှာထင်ရှား သတိထား နာမ်တရားလို့ရှုရမည် ´´
ရုပ် နာမ်ခန္ဓာလို့ ဘုန်းကြီးပြောလိုက်တော့ `နာမ် ´ ဆိုတဲ့ သဘောတရားလေး သိအောင် အကျယ်ချဲ့ပြီး ရှင်းပါ့မယ်။` ရုပ် ´ ဆိုတာသည် ကိုယ်မှာထင်ရှားတဲ့ သဘောတရား။ ကိုယ်မှာ သိသာထင်ရှားတာသည် ရုပ်တရားပါ။
စိတ်ထဲမှာ ပေါ်နေမယ်။ ထင်ရှားမယ်။ ဖြစ်လာမယ်ဆိုတဲ့သဘောသည် ` နာမ် ´ တရားပါ။ စိတ်ထဲဖြစ်တာ စိတ်ထဲပေါ်လာတာ နာမ်တရား။ စိတ်ထဲမှာ ထင်ရှားနေတာ စိတ်ကသိနေတာသည် နာမ်တရားပါ။
လူတစ်ယောက်မှာ ဘာရှိသလဲလို့ ကြည့်လိုက်ပါ။ လူဆိုတာ ကိုယ်နဲ့စိတ်နဲ့ ပေါင်းထားတာပါ။ ကိုယ်နဲ့စိတ်ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ သတ္တဝါပါ။ ` ရုပ် နဲ့ နာမ် ´ ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းထားတာကို` လူ ´ လို့ ခေါ်နေကြတယ်။ ပြင်ပကနေ မြင်သာထင်သာတဲ့ သွားလာလှုပ်ရှားနိုင်တဲ့ ဒီခန္ဓာကြီးသည် ` ရုပ်ခန္ဓာ ´ ပါ။ တွေးတော ကြံစည် တတ်သိတတ်တဲ့ သဘောကို ` နာမ်ခန္ဓာ ´ လို့ ပြောရမယ်။
ဒီတော့ ရုပ်နဲ့နာမ် နှစ်မ်ျိုးသိသွားပြီ။ ကိုယ်မှာထင်ရှားရင် ရုပ်တရား ။ စိတ်မှာထင်ရှားရင် နာမ်တရားပါ။ အဲဒီ နှစ်မျိုးကို တွေ့အောင် မြင်အောင် သိအောင် သတိထားပြီးကြည့်ပါ။ ` သတ်ိ ´ ထားစောင့်ကြည့်တဲ့ ချိန်ခါမှာ ထင်ရှားလာလိမ့်မယ်။ ပေါ်လာပါလ်ိမ့်မယ်။
` တရားရှာတယ် တရားရှာတယ် ´ ပြောတော့ ကျင့်ကြံအားထုတ်နေကြတဲ့ တရားဟာ လိုက် ရှာရမှာလား ? စောင့်ကြည့်ရမှာလား ?
စောင့်ကြည့်ရမှာပါ ။ လိုက်မရှာပါနဲ့။ ဘယ်နေရာမှာ တရားပေါ်လာမလဲ ? ဘယ်နေရာ တရားဖြစ်လာမလဲ ? ဆိုပြီး လိုက်မရှာနဲ့။ ဘာတွေ ဖြစ်ချင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုဖြစ်လာရင် ကောင်းမယ်လို့ မမျှော်ပါနဲ့။ အသာလေး တစ်နေရာက စောင့်ကြည့်နေပါ။ ကျားသစ် အစာချောင်းသလို ငြိမ်ငြိမ်လေးနေပြီး ကြည့်နေပါ။ ကြည့်နေမယ်ဆိုရင် တွေ့လာပါလိမ့်မယ်။
ကိုယ်မှာ သေချာစွာကြည့်လိုက်ရင်လည်း ကိုယ်ပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့ သဘောတရားတွေ ထင်ရှား တွေ့မြင်လာလိမ့်မယ်။ စိတ်မှာကြည့်ရင် စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ သဘောတရားတွေ ထင်ရှား တွေ့မြင်လာလိမ့်မယ်။ ထင်ရှားလာ ပေါ်လွင်လာတဲ့ သဘောတရားကို အဆက်မပြတ် ကြည့်ရှုနေတာဟာ တရားကျင့်နေတာပါ ။ *****
` ဓမ္မာ နုပဿနာ သတိပဋ္ဌာန် ´ ဆိုတဲ့နေရာမှာ ` ဓမ္မ ´ ဆိုတာသည် ရုပ်နဲ့နာမ်။ ` အနုပဿနာ ´ ဆိုတာ ထပ်ကာထပ်ကာ ရှုမှတ်နေတာပါ။ တစ်ခါတစ်လေမဟုတ်ဘူး။ ထပ်ကာထပ်ကာ ရှုမှတ်နေတာပါ။ တစ်ကြိမ်တစ်လေ မဟုတ်ဘူး။ အကြိမ်များစွာ အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ရှုမှတိနေတာပါ။ မရပ်မနား ထပ်ကာ ထပ်ကာ မပြတ်ရှုမှတ်နေတာသည် ` အနုပဿနာ ´ ။
ဘာကို ရှုမလဲဆိုရင်တော့ ` ဓမ္မ´လို့ခေါ်တဲ့ရုပ်နဲ့နာမ်ကိုပါ။ ရုပ်ဓမ္မ နာမ်ဓမ္မကို သတိထား စောင့်ကြည့်ကာ ထင်ရှားရာ ပေါ်လွင်ရာမှာ မပြတ်ရှုမှတ်နေတာသည် ` ဓမ္မာနုပဿနာ သတိပဋ္ဌာန် ´ ပါ။ တရားအလုပ်မှာ ` သတ်ိ ´ ထားရတယ်။ အရှုခံ ရုပ်နာမ်ကို သတိထားရမယ်။ တရားအလုပ်က ရှင်းရှင်းပြောရင် ` သတိ ´ အလုပ်ပါ။ မြန်မာစကားပုံ ရှိတယ်။ `` စကားချုပ်တော့ ကတိ ´´`` တရားချုပ်တော့ သတိ ´´ တဲ့။ စကားတွေ ဘယ်လောက်များများ အဲဒီစကားတွေရဲ့အချုပ်သည် ` ကတိ ´ ပါဘဲ။တရားကို ချုပ်ထားတာက ` သတ်ိ ´ ပါဘဲ။
*** သတ်ိတစ်လုံး ရှိပြီဆိုရင် တရားဖြစ်ပါပြီ ***
သတိတစ်လုံး မြဲနေပြီဆိုရင် ရှုမှတ်ရမယ့်တရား မြင်ပါပြီ။ ` သတိထားရင် သတိရှိရင် ယောဂီတို့ တွေ့ရမယ့် တရားတွေကို တွေ့လာလိမ့်မယ် ´ထင်ရှားလာမယ်။ ပေါ်လွင်လာမယ်။ ` တရားကျင့်သူတွေကို ဘယ်သူတရားပြလဲဆိုရင် တရားကပဲ တရားပြတာပါ။ ´ဒီခန္ဓာထဲမှာ ရှိနေတဲ့ သဘောတရားတွေသည် တရားသဘောတွေပါ။ ကိုယ်မှာထင်ရှားရင် ရုပ်တရား။ စ်ိတ်မှာထင်ရှားရင် နာမ်တရားပါ။ အဲဒီနှစ်မျိုးကို ရှုမှတ်နေတာသည် ဓမ္မာနုပဿနာ ပါ။
သတိ ဦးစီးတယ်။ သတိ ခေါင်းဆောင်တယ်။ သတိကို ရှေ့တန်းတင်တယ်။ သတိကို ပဓာနထားတယ်။ ` သတိထားမှ တရားဖြစ်ပါတယ်။ သတိမထားရင် တရား မဖြစ်ပါဘူး။ သတိမပါဘဲ တရားကျင့်လို့ မရပါဘူး ´ထိုင်တော့ ထိုင်နေတာပဲ သတိမပါဘူး။ အမှတ်တမဲ့ ဒီအတိုင်းထိုင်ရုံထိုင်နေတယ်ဆိုရင် တရားမဖြစ်ပါဘူး။ ဘာလို့တရားမဖြစ်တာလဲ ? သတိ မရှိလို့ပါ။
တရားက ရှိနေတယ်။ သတိမထားလို့။ သတိထားပြီး မကြည့်လို့ တရားမတွေ့တာပါ။ ကိုယ်မှာ လှည့်ပြီးတော့ သတိထားကြည့်။ စိတ်ထဲမှာ ပြန်ပြီးတော့ သတိထားကြည့်ပါ။ ဒီသတိလေးနဲ့ ကိုယ်နဲ့စိတ်ကို လှည့်ပတ် ကြည့်တဲ့အခါမှာ ပေါ်လွင်လာ ထင်ရှားလာတဲ့ သဘောတရားဟာ ကိုယ်ရှုရမယ့် အရှုခံတရားပါ။
` ဒီလောက်ဆိုရင် ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ် လိုရင်း အချုပ်ကို သိလာပြီ။ မနက်ဖြန်နံနက်စောစောမှာ
စပြီးတော့ တရားထိုင်ကြမယ်။ တရား ကျင့်ကြံအားထုတ်မယ်ပေါ့။
*** တရားထိုင်ကြတဲ့အခါမှာ ဘယ်လိုရှုရမလဲ ဆိုတော့ ဒီခန္ဓာကိုယ် သက်သောင့်သက်သာနဲ့
နေသာထိုင်သာရှိတဲ့ အနေအထားမျိုး တင်ပျဉ်ခွေ ချင်ရင်ခွေ ။ ကျုံကျုံထိုင်ချင်ရင် ထိုင်ပါ။ ခါးကို ဖြောင့်ဖြောင့်ထား ။ ဦးခေါင်း ရှေ့တည့်တည့်ကြည့် ။ မျက်စိအသာမှိတ်ထားပါ။ နှုတ်ခမ်းကို အသာစေ့ပြီး ဘယ်ဘက်လက်ကို အောက်ကထား။ ညာဘက်လက်ကို အပေါ်ကတင်။ လက်မထိပ်လေး နှစ်ခု ထိထားလိ်ုက်ပါ ။
ပြီးရင် ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံး ပြန်ကြည့်ပါ။ ဘယ်နေရာမှာ အဆင်မပြေတာရှိလဲ။ မမျှတတာ အချိုးမကျတာ ရှိလဲ။ ပြန်ကြည့်ပါ။ အားလုံး စိတ်တိုင်းကျပြီ။ ဒီပုံစံ ဒီအနေအထားနဲ့ ထိုင်မယ်ဆိုရင် တစ်နာရီ အေးအေးဆေးဆေး သက်သောင့် သက်သာနဲ့ ထိုင်နိုင်ပြီဆိုရင် ဘုန်းကြီးတို့ပရိ သတ် အသက်ရှုတဲ့နေရာမှာ စပြီးတော့ ရှုမှတ် အားထုတ်ကြပါမယ် ။
( ဓမ္မဒူတ ဒေါက်တာ အရှင်ပညိဿရ ၏ တရားဘယ်လို ကျင့်ရမလဲ
အလုပ်ပေး တရားတော် အပိုင်း - ၃ အား ဓမ္မဒါနပြုပါသည်။ )